नेपाल आज | पहिले भारत त्यसपछि नेपाल सिध्याउने पश्चिमा रणनीति ( भिडियोसहित)
पहिले भारत त्यसपछि नेपाल सिध्याउने पश्चिमा रणनीति ( भिडियोसहित)
विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार विश्व राजनीतिमा भैरहेको ध्रवीकरणको अशर प्रत्यक्षरुपमा नेपालमा परिरहेको छ । पूर्र्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफतावा आलम लगायतका घटनामा समेत विश्व राजनीतिको प्रभाव छ ।
विश्व शक्ति केन्द्रहरुबीच भैरहेको राजनीतिक समीकरणको फेरबदल अनुसार नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु पनि विभाजित भैरहेका छन् । कुनै मुद्दामा त मनपेट एउटै भएका नेताहरु समेत फरक ध्रुवमा बाँडिन बाध्य छन् । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कहिले निकटता र कहिले कटुता हुने कारण पनि यही हो ।
शक्ति केन्द्रले जे भन्छन् त्यही अनुसार यीनिहरु चल्ने भएकाले दल र नेताहरुको राजनीतिमा एकरुपता नभएको हो । महरा र आलमले गल्ती गरेका होलान् त्यो अर्कै पाटो हो तर कुन समयमा उनीहरुलाई सिध्याउन खोजियो त ? महरा र रोशीनको सम्बन्धका विषयमा आज आएर थाहा भएको हो र ? आलम प्रकरणमा १२ वर्षसम्म के हेरेर बसे ? माधव नेपाल स्वयंले आलमलाई मन्त्री बनाएको होइन ?
दाहाल भन्छन्, ‘ महरालाई अमेरिका र प्रधानमन्त्रीको रुचीअनुसार ५६ अर्ब बराबरको सहायता रकम संसदबाट पास गर्न नमानेकोमा फसाइएको हो । स्पष्टरुपमा भन्नु पर्दा अमेरिकाले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत महरालाई फसाएको हो । जहाँसम्म आलमको कुरा छ, तीनलाई भारतीयहरुले फसाएका हुन् । भारतमा हिन्दुत्वको अभियान चलेको छ । तराईंमा मदरसा स्थापना लगायतका गतिविधिमा आलमको संलग्नता देखिएपछि उनलाई पनि फसाइएको हो । ’
महरा र आलम जस्तै अन्य नेताहरु पनि निशानामा छन् । आधा दर्जनजति त पक्राउ परिसकेका छन् । अझै ठूल्ठूला नेताहरुलाई फसाउने योजना छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि निशाना साँधिएको छ । नेपालमा नेताहरुमाथि कुनैपनि बेला केही पनि हुनसक्छ । नेपालमा के हुन्छ भन्ने कुरा विदेशीले निर्णय गर्ने भएकाले यहाँको परिस्थिति हेरेर अनुमान गर्न गार्हो हुन्छ ।
अझ विदेशीमा पनि मुख्यतः भारत, चीन, युरोपियन र अमेरिकनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हो । पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र भएका केही महत्वपूर्ण सम्झौताले पश्चिमाहरु झस्किएका छन् । उनीहरुले यहाँ कुनैपनि बेला केही पनि घटना गरिाउन सक्छन् । भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगराउन अनेकौं प्रयास गर्छन् । यो योजनामा नेपाली नेताहरु नै प्रयोग हुने हो । तर, चीन रोकिने छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सशरीर उपस्थित भएर गरिएका सम्झौता भएकाले यसमा चीन इमान्दर र अडिग रहन्छ । नेपालको त भरोस छैन तर एकतर्फीरुपमा भएपनि चीनले भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ । अब कुनैपनि माइकालाल आएर चीनलाई रोक्न सक्दैन । चीनको ‘बीआरआई’ बृहत योजना कार्यान्वयनमा जान्छ । यसले अमेरिकनहरुलाई कमजोर बनाएको छ ।
‘नेपाल मामिलामा भारत र चीन एकठाउँ उभिन सक्नुपर्छ । कतिपय मुद्दामा भारत र चीनबीच निकटता र कतिपय सवालमा असहमति पनि छ । तर, पश्चिमाहरुले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन र भारतविरुद्ध गतिविधि गर्ने रणनीति लिएका छन् । नेपालमा पश्चिमाहरु बलिया हुनु भनेको सबैभन्दा ठूलो खतरा भारतका लागि हुने हो । उनीहरुले पहिले भारत सिध्याउँछन् त्यसपछि नेपाललाई खत्तम पार्छन् ।’ दाहालको तर्क छ ।